लागुऔषध तस्करीमा पूर्वमन्त्री ? « Drishti News – Nepalese News Portal
लागुऔषध तस्करीमा पूर्वमन्त्री ?
१ भाद्र २०७८, मंगलबार 1:30 pm
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआइजी मुकुन्द आचार्यमाथि छानबिनको माग गर्ने पूर्व गृहराज्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेल आफैं छानबिनमा तानिएका छन् । लागू औषध तस्करी गिरोहलाई संरक्षण दिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
दुई साताअघि उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्जमा प्रहरीले साढे ६ अर्ब भारु बराबरको लागू औषध बरामद गरेको घटनामा सांसद कँडेल मुछिएका हुन् ।
गत ५ अगष्टमा सीमा सशस्त्र बल र स्थानीय प्रहरीले नेपाल भारत सीमा छेउबाट एक गाडी लागू औषध बरामद गरेको थियो । जुन घटनाको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक ग¥यो । लागू औषधसहित प्रहरीले कुमार गुप्तालाई पक्राउ गरेको छ । गिरोहका नाइके गोविन्द गुप्ता भएको र उनलाई सांसद कँडेलले संरक्षण गरेको आरोप भारतीय सुरक्षा अधिकारीले लगाएका छन् । भारतीय संचारमाध्यमले समेत गोविन्दलाई नेपालका नेताको संरक्षण रहेको भनेर हंगामा मच्चाइसकेका छन् ।
सांसद कँडेल र गुप्ताबीच निकटता पुष्टि भइसकेको छ । कँडेलसँग बसेर उनले खिचेका फोटो समेत सार्वजनिक भएका छन् । विवादास्पद पृष्ठभुमी भएका कँडेल आफैं लागू औषध तस्करीमा त संलग्न छैनन् भन्ने प्रष्ट उठेको छ । तर, हाल कांग्रेस सांसदमा भएकाले उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन ।
नेता कँडेल विवादास्पद पृष्ठभुमी भएका नेता हुन् । पश्चिम नवलपरासीमा उनको सीमा छेउमा घर छ । मुख्यगरी सीमापार तस्करी उनको प्रमुख धन्दा भएको स्रोत बताउँछ । तस्करीकै लागि उनले आफू अनुकुल प्रहरी जिल्लामा लैजाने गरेका छन् ।
उनको भारतको समेत रासनकार्ड बनाएका छन् । भारतीय नागरिकको हैसियमा उनी भारतका स्कुल लगायत संस्थामा समेत आबद्ध छन् । गृह मन्त्रालयले उनको नेपाल र भारत दुवै देशको नागरिकता रहेको पुष्टि गरेपनि कारबाही हुन सकेको छैन । पछिल्लो लागू औषध तस्करीको घटनाले उनी थप बदनाम भएका छन् ।
कँडेलले हालै बर्दघाटका इन्सपेक्टर कपिल वाग्लेको मृत्यु घटनामा डिआइजी आचार्यमाथि छानबिनको माग गरेका थिए । सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । डिआइजी आचार्य एसपीका रुपमा नवलपरासीमा हुँदा कँडेलका मान्छे पक्राउ गरेकाले त्यसको रिस उनले फेरेको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको छ । उनै आचार्य हाल लुम्बिनी प्रदेशमा आएपछि उनलाई हटाउन कँडेल लागिपरेका छन् ।